သောသီခို: ကရင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ ညီညွတ်ရေး ကော်မီတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း
This is what we need to be Kawthoolei Army. And also Kawthoolei Government for Kawthoolei State of the UNION of (Myanmar).
you have to be careful withaman who has two different names _ Dr. Saw Htay Myint/ Dr. Alice who wasaproblem to BMWEC in Mae Sot
ကရင်တွေ သတိထားပါ။ အဲဒီဒေါက်တာအဲလက် ခေါ် စောဌေးမြင့်(နယ်ခြားစောင့်တပ်နယ်မှူး) ဟာ ကရင်အမျိူးသားတစ်ဦးမဟုတ်ပါကြောင်း အသိပေးလိုပါတယ်။ ဒီလူက နာဂစ်ကာလမှာ နယ်ခြားကိုရောက်လာသူပါ။ ကရင်ယောက်ဆောင် ရန်သူ့ လူဖြစ်တယ်ဆိုဒါ အသိပေးလိုတယ်။ သူ့ အကြောင်းတွေကို ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမည်
poe htoo said...
ဒါသတိထားရမယ့်အချက်တစ်ခုပဲ ။ ဒေါက်တာစောဌေးမြင့် အကြောင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး အခြားလူတွေသိအောင်ဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ်။